Transparency International Inoti VaTomana Vari Kuita Chizivano paBasa
Kurume 22, 2011
Mutevedzeri wegurukota rezvemitemo, VaObert Gutu, vanoti muchuchisi mukuru wenyika, VaJohannes Tomana, vanofanirwa kuferefetwa pamusoro penyaya dzine chekuita nekuraswa nematare kwenyaya dzaipomerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende nevanodyidzana neZanu PF.
Vanhu vanonzi vane nyaya dzakaraswa vanosanganisira vaive mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaBright Matonga.
Kurudziro yaVaGutu yekuti VaTomana vaferefetwe, inotevera zvakaburitswa muongororo yakaitwa neTransparency International Zimbabwe.
Sangano iri rinoti VaTomana vane chekuita nekuraswa kwemhosva dzakasiyana siyana dzaipomerwa VaMatonga, muzvinabhisinesi munyaya dzemigodhi, VaPatrick Mavros, vaive sachigaro vebhodhi reZUPCO, VaCharles Nherera, pamwe nevaive chiremba wekuBindura, Amai Beauty Basile.
VaGutu vanoti pane humbowo hwakaburitswa neTransparency International Zimbabwe hunorakidza kuti VaTomana vanofanirwa kuferefetwa.
Asi VaTomana vanoti mashoko aVaGutu pamwe nesangano reTransparency International Zimbabwe aya anozvidza hofisi huru yehurumende yakaumbwa nebumbiro remitemo yenyika. Vatiwo vari kutaura nezvenyaya iyi vanogona kutorerwa matanho akakodzera.
Hurukuro naVaJohannes Tomana